UZuma, uBabes Wodumo, uMandoza noZalo, bahamba phambili kuGoogle | News24
Johannesburg - Isikhondlakhondla senkampani yezobuchwepheshe be-internet, uGoogle, usukhiphe uhlu lwezinto noma abantu abahamba phambili ngokubhekwa kusetshenziswa ubucwepheshe bokubheka ulwazi (search engine) bakwaGoogle nolukhonzwe kakhulu ngabantu abaningi abasebenzisa i-internet.
NgoLwesithathu, uGoogle ukhiphe le mininingwane yonyaka ka-2016 nokuwuhlu olukhishwa minyaka yonke nolwaziwa nge-Year in Search.
OLUNYE UDABA: Angeke ngilokhu ngiphathana nebhayibheli - Babes Wodumo
Lokhu kuyaye kunikeze isithombe ngezinto ezingenisile, abantu kanye nezinto ezenzakalayo ezithathe amehlo abantu.
Phakathi kosopolitiki abahambe phambili ngokubhekwa kuGoogle kunyaka ka-2016 kubalwa uMengameli wezwe, uJacob Zuma, umndeni wezinjinga ezihlale zisematheni, nezingabangani noMengameli Zuma, abakwaGupta, yigama elithi ‘uMvikeli woMphakathi’ kanye nalowo obenguMvikeli woMphakathi, uThuli Madonsela.
Ngasohlangothini losaziwayo, kugqame abaculi abafana noMandoza, uBabes Wodumo, u-Emtee kanye noNasty C.
Ezinhlelweni zikamabonakude ezibhekwe kakhulu kugqame uZalo, iMuvhango, iSibaya, ama-Idols SA kanye ne-Skeem Saam.
Nalu uhlu lwabahambe phambili ngokubhekwa kuGoogle onyakeni ka-2016:
Izinto ezibhekwe kakhulu sekuhlanganiswe konke:
Osopolitiki baseNingizimu Afrika ababhekwe kakhulu kanye nabantu abadumile:
2. UMvikeli woMphakathi
3. Umndeni wakwaGupta
Osaziwayo baseNingizimu Afrika ababhekwe kakhulu:
Izinhlelo zakumabonakude zaseNingizimu Afrika ezibhekwe kakhulu :